करार स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना थप- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
करार स्वास्थ्यकर्मीको ३ महिना थप
श्रावण ९, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ लाई लक्षित गर्दै करारका स्वास्थ्यकर्मीको म्याद ३ महिना थपेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
‘महामारी हराउँदै गयो भने म्याद थप नगर्ने भन्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरसँगै तेस्रो पनि देखियो भन्ने छ । कोभिडका अस्पताल पुनः भरिन थालेपछि करारमा नियुक्त गरिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पुनः म्याद थपेका हौँ ।’ सरकारले आफूले सञ्चालन गरेका कोभिडका अस्पतालमा उनीहरू कार्यरत रहेको खड्काले बताए ।
पोखराको लेखनाथस्थित सरुवा तथा संक्रमण रोग अस्पताल, मितेरी शिशु अस्पताल, ११ वटै जिल्ला अस्पतालमा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेको थियो । करारका स्वास्थ्यकर्मीलाई म्याद थप नगर्ने तयारी गरेको सरकारले उनीहरूका लागि बजेटसमेत छुट्याएको थिएन् । उनीहरूको म्याद असार मसान्तमा सकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रमेश शर्माले प्रदेशस्तरीय कोभिड १९ न्यूनीकरण व्यवस्थापनको कोषबाट तलब खुवाउने गरी नियुक्त गरिएको बताए । कोभिड १९ का लागि पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा ४ सय ४४ जना नियुक्त भएका थिए । ३ महिनाका लागि उनीहरूको तलब झन्डै ४ करोड हुने उनले बताए । ‘मनाङ र मुस्ताङमा करारका स्वास्थ्यकर्मी १७/१८ छन्,’ उनले भने, ‘अन्य जिल्लामा धेरै छन् । कार्यालय सहयोगीसहित विभिन्न पदमा नियुक्ति गरिएको थियो ।’
संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा र प्रदेश सरकारले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो नखुलेका कारण कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारीको निकै अभाव थियो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यालयअन्तर्गत कन्ट्रक्सनबाट तलब खाने कर्मचारीको म्याद थप नगरिएको खड्काले बताए ।
खड्काका अनुसार गण्डकीमा ९ सय ८८ कर्मचारी करारका छन् । स्वास्थ्यतर्फका ४ सय ४४ जनालाई ३ महिना र अन्य कर्मचारीलाई १ महिनामा मात्र करार थपिएको हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले आगामी भदौदेखि स्वास्थ्यतर्फ कर्मचारी भर्नाको तयारी गरेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १०:४८
श्यामसुन्दरका उदास आँखा
श्रावण ९, २०७८ मुना चौधरी
अधबैंसे, सिकुटे, ख्याउटे, गाला भित्र धसिएको, कालो वर्णको ! कलेजी रङको कुर्ता र हरियो बुट्टेदार लुङ्गी । एक हातले मोबाइल समातेर कुरा गरिरहेको, अर्को हातले बसको रड समातिरहेको । काखीमा आएको पसिनाले उसको कुर्ता भिजेको थियो । ऊ अर्थात श्यामसुन्दर ।
ढोकाअगाडि दायाँतिरको १ र २ नम्बर सिटछेउको भुँइमा एक जना स्वास्नीमान्छे थपक्क बसेकी थिई । सारी लगाएकी उसको सिउँदोमा लामो पहेंलो सिन्दुर थियो । टाउको छोप्ने गरी ओढ्ने ओढेकी थिई । निधारमा भिक्स दलिरहेकी थिई ।
०६५ को दसैं । गाडी पाउनै सकस, पाइहाले सिट पाउनै सकस । साँझ अफिस बिदा हुनासाथ सुन्धारा र कोटेश्वरका टिकट काउन्टर पुग्थें, तर टिकट नपाएर फिर्थें । फूलपातीको दिन, दिउँसो ३ बजे । डेराबाट निस्किएकी थिएँ तर टिकट थिएन । बस पाए घर जान्छु, नपाए डेरै फर्किन्छु सोचेर कोटेश्वर चोक पुगेकी थिएँ ।
साँझ ६ बजिसकेको थियो । बस बिसौनीमा उभिइरहेकी थिएँ । धरान जाने बस अचानक रोकियो । रोकिएको बसको झ्यालबाट आवाज आयो, ‘बैनी कुन बस हो ?’ झ्यालमा हेरें, गाउँका दाजु–भाउजू रहेछन् । हातले इसारा गर्दै भनें, ‘मेरो बस छैन । टिकट पाइनँ ।’ इसारापछि दाइ बसबाट ओर्लेर मेरो नजिक आए । दाइले भन्नुभयो, ‘मेरो सिटमा बसेर हिँड । म उभिएर जान्छु ।’
‘हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, म जान्नँ । बाटो लामो छ । आज नपाए भोलि पाउला नि !’
‘अहिले टिकट पाउन समस्या छ । यसैमा हिँड ।’
झ्यालमा हेरें, भाउजू पनि ‘जाऔं’ को इसारा गरिरहहेकी थिइन्, बस चढें । दाइले कन्डक्टरसँग मुढामा बसेर जाने टिकट लिनुभयो । दाइकी ७ वर्षकी छोरी पनि थिई । दाइको सिटमा बस्दै भदैनीलाई काखमा लिएँ । करिब एक घण्टापछि बस खचाखच भरियो । सिटको दुवै बुइँगलबीच राखिएका चारओटा मुढामा दाइसँगै तीन जना मान्छे थिए । कोटेश्वरबाट कलंकी पुग्दा झनै मान्छे थपिए । मेरो सिटछेउ उभिएको मान्छे फोनमा कुरा गरिरहेको थियो, ‘हम श्यामसुन्दर बोलै छि । हम जहानके साथ घर चल आबै छि ।’ उसको छेउमा रहेको बच्चा भीडभाडको अत्यासले रोइरहेको थियो ।
निधारमा भिक्स दलिरहेकी श्रीमतीको अगाडि फोनमा कुरा गर्दै श्यामसुन्दरले बच्चालाई बोक्यो । कन्डक्टर भाडा उठाउँदै आयो । मुढामा बसेकालाई पाँच सय र उभिएकालाई चार सय माग्दै थियो । श्यामसुन्दरले आठ सय दिँदै भुइँमा बसेकी स्वास्नीमान्छेलाई देखाउँदै भन्यो, ‘उसको र मेरो दुई जनाको ।’
ऊ ८ सय तिरेर २० रुपैयाँ फिर्ता माग्दै बोलिरहेथ्यो, ‘हमनी के तरकारी बेच्छ हजुर । बीस रुपैयाँ दिनुस् फिर्ता । छोराको रास्ता खर्च आउँछ ।’
कन्डक्टरले जवाफ दियो, ‘ओ भैया, रेट त्यति नै हो । फिर्ता आउँदैन ।’ उसले विनम्र स्वरमा भन्यो, ‘२० रुपैयाँ फिर्ता दिनुस् न हजुर ।’ कन्डक्टर झोकिँदै बोल्यो, ‘एकपटकमा कुरा बुझ्दैनस् ?’
कन्डक्टरको रिसले उसको अनुहार उदास भयो । ऊ केही बोलेन । उसको अनुहार रातो, नीलो भयो ।
भाउजूले उसलाई सोधिन्, ‘तिम्रो जहानलाई सन्चो छैन ?’ ‘कल रातदेखि ज्वरो लागेर तबियत खराब छ हजुर । दबाई खाइरहेछ ।’
‘ज्वरो आएको मान्छेलाई लिएर किन घर हिँडेको ? सन्चो भएपछि जाँदा हुन्थ्यो नि ।’
‘चाड परवमा घरमा बाआमाले आस लगाएको हुन्छ हजुर ।’ बिरामी मान्छेका लागि आफ्नो सिट छाड्न कोही तयार थिएनन् । झन्डै १४ घण्टाको बाटो जो थियो । थानकोटको घुम्तीमा थियौं ।
बसको बत्ती निभाइएको थियो । भाउजू बान्ता गर्न थालिन् । भाउजूबाहेक गाडीमा बसेका अरू छ–सात जना पनि वाकवाक गरिरहेका थिए । कन्डक्टर प्लास्टिकको झोला दिइरहेको थियो । वान्ताको नुनिलो, अमिलो, नमीठो गन्ध बसभरि फैलिरहेको थियो । वान्ता नगर्ने मान्छे पनि वान्ता गर्न थालेका थिए । भाउजू शिथिल भइसकेकी थिइन् । आँखा बन्द गरिरहेकी थिइन् ।
यत्तिकैमा म निदाएछु । गाडी रोकिँदा आँखा खुल्यो । मुग्लिन पुगिसकेका थियौं । खाना खुवाउन रोकिएको थियो गाडी । सबै ओर्ले । शौचालय गएर हातमुख धोएर खाना खान बसे । श्यामसुन्दर भने होटेलअघि भुइँमा बदामको खोस्टा छोडाउँदै छोरोलाई खुवाउँदै थियो । आफू पनि खाइरहेको थियो । उसको बिरामी जहानले केही खाएको देखिनँ ।बसमा छिरेपछि एउटा स्याउ झोलाबाट झिकेर उसको छोरोलाई दिएँ । छोरो आमाछेउ बसेर स्याउ खान थाल्यो । आमा ओढ्नासँग बसको भित्तामा अडेसिएर सुतिरहेकी थिई ।
२ बजे राति, हेटौंडा । उपद्रो गर्मी । सबैले ज्याकेट, स्वेटर धमाधम फुकाले । बस रोकिँदा पसिना ह्वास्सै गनाउँथ्यो । सबैले धमाधम झ्याल खोले ।
नारायणगढमा एक नम्बर सिटको यात्रु ओर्लियो । खाली सिट देखेर श्यामसुन्दर कन्डक्टरतिर हेर्दै भन्यो, ‘यी खाली सिटमा मेरो जहानलाई बस्न दिनुस् न हजुर ।’
‘त्यहाँ अर्को यात्रु आउँदै छ । जहाँको पैसा तिरेको छस् त्यहाँ बस् ।’ उसको अनुहार फेरि उदास भयो । आफ्नो जहानतिर हेर्‍यो । घोसेमुन्टो लाएर सुतिरहेकी थिई । ऊ घरिघरि पछाडि फर्केर बसको सिटहरूमा आँखा डुलाउँथ्यो । नारायणगढमा एउटी स्वास्नीमान्छे चढी । खाली सिटमा बसी । मोटी थिई । लिपिस्टिक र शृंगार गरेकी थिई । कन्डक्टरले नसुनिदिएपछि श्यामसुन्दरले त्यो स्वास्नीमान्छेलाई भन्यो, ‘साउनी, मेरो जहान बेराम छ । उसलाई सिटमा बस्न दिनुस् न ।’
स्वास्नीमान्छे रिसाउँदै बोली, ‘मैले पैसा तिरेको छु सिटको । कत्ति बाठो मधिसे मोरो ।’
श्यामसुन्दरको आँखा फेरि पनि उदास भए ।
म फेरि निदाएछु । आँखा खुल्दा बिहानको ७ः३० बजेको थियो । ढल्केवर पुगिसकेका थियौं । उभिएका मान्छे पूरै गलेका देखिन्थे । एक घण्टापछि हाम्रो गाउँ भोटियाटोल चोकमा बस रोकियो, ओर्लियौं ।
श्यामसुन्दर राजविराज जाने मान्छे । धरान जाने बस राजविराज जाँदैन । रुपनी चोकमा ओर्लेर राजविराज जाने बस चढ्नुपर्छ । त्यहाँबाट आधा घण्टामा राजविराज पुग्छ । उसले रुपनी चोकबाट बस पायो कि पाएन ? बस पायो भने सिट पायो कि पाएन ? उसको स्वास्नीलाई सन्चो भयो कि भएन ? भीडभाड गाडी चढ्दा यही दृश्य सम्झिन्छु, निरीह र मधेसी देखेर मान्छेहरू अझैसम्म श्यामसुन्दरलाई हेपिरहेकै छन् ?
प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ १०:३०